mairie-antananarivo – Fifanitsanana baolina kitra: Uscafoot sy ny Mi 20 FC
Fifanitsanana baolina kitra: Uscafoot sy ny Mi 20 FC
auteur 3 martsa 2017 Commentaires fermés
Nivoaka tao anatin’ny hafaliana tanteraka ny Ekipan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny USCA FOOT (UNION SPORTIVE de la COMMUNE Urbaine D’Antananarivo ) androany maraina 03 martsa 2017 tamin’ny fifanitsanana fiadiana ny tompon-dakan’ny “ligin’ Analamanaga” baolina kitra, izay notontosaina tetsy amin’ny Kianjaben’i Mahamasina.
Nivoaka mpandresy tamin’izany ny USCAFOOT nandavo ny ekipan’ny MI 20 FC tamin’ny isa mazava 03 noho aotra .Teo amin’ny fizaram-potoana voalohany, 6 minitra nilalaovana no nahatafiditra ny baolina voalohany USCAFOOT, niampy isa iray izany nandritra ny 11 minitra nilalaovana. Io isa 2 no ho aotra no nentin’ny andaniny sy ny ankilany niala sasatra. Teo amin’ny fizaram-potoana faharoa, mbola niampy isa iray ny isa azon’ny ekipan’ny Kaominina, ka io isa 3 no ho aotra io no nisarahan’ny ekipa roa tonta teo amin’ny 90 minitra nilalaovana.
Marihana fa ny taona 1996 no efa niforona ny Ekipan’ny Kaominina USCAFOOT, ny taona 2009 indray dia novaina ny anaran’izy ireo ho IFC (IARIVO FOOT CLUB) ary ny taona 2016 dia naverina ho USCAFOOT indray ny anarany. Amin’izao fotoana izao dia miisa 30 ireo mpilalao ao amin’ny USCAFOOT, ny salan-taonan’izy ireo dia eo anelanelan’ny 20 ka hatramin’ny 31 taona.
Anisan’ny fitazaina ny mpiasan’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra ny fanatanjahatena mba tsy hiroana any amin’ny zavatra tsy tokony ho izy ny mpiasa ary mila fialamboly koa izy ireo araka ny foto-kevitrin’ny Ben’ny Tanàna, Lalao Ravalomanana. Noho izany fisian’ny fifanintsanana baolina kitra izany, tonga nanohana tetsy Mahamasina ny mpiasan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra, notarihan’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana.
Niarahaba ny Ekipa nandresy ny Ben’ny Tanàna, Lalao Ravalomanana ary nanambara izy fa nanao ezaka ho reharehan’ny Tanànan’Antananarivo izy ireo ary maromaroa ny toy izao hoy izy.